Ithagethi yesicelo seScholarship Portal collegescholarships.org 2021 Uhlaziyo: Iindaba zeSikolo sangoku
Isicelo seScholarship Target: I-Target Corporation ibonelela ngenani lokufunda kunye nokunika amathuba abafundi. Nangona kunjalo, abafundi kufuneka bahlangabezane neekhrayitheriya zokufaneleka. Ukongeza, amaqabane ekujoliswe kuwo ekufundiseni kunye neminye imibutho ukwenza amabhaso ongezelelweyo emali.
Ke, abafundi banokufikelela kwezi wokuya kwi-intanethi ngaphandle kweendleko. Nangona kunjalo, ukwazi okungakumbi malunga nale mfundo kunye nayo iimfuno zokufaneleka qhubeka ufunda eli qhekeza. Kweli nqaku uza kufumana ulwazi malunga nomhla wokugqibela woku scholarship. Kwaye ungasifaka njani / phi isicelo.
Isishwankathelo malunga neThagethi yoShishino
Corporation Target ngumbutho wentengiso waseMelika. Kwaye ngumthengisi we-8 ngobukhulu kwi eunited States. Kwakhona licandelo le-S & P 500 Index. Ngapha koko, ayihambelani neThagethi yase-Australia.
Ithagethi yazinzisa ngokwahlulahlula ixesha leentsuku zeQumrhu likaDayton-Hudson kwiminyaka yee-1970. Kwaye yaqala ukwandisa ivenkile kwilizwe lonke ngee-1980. Kwakhona, yazisa ngeefomathi ezintsha zevenkile phantsi kwento ekujoliswe kuyo ngo-1990.
Ukongeza, inkampani ifumene impumelelo njengomdlali wexabiso eliphantsi kwishishini. Inkampani engumzali yathiywa igama lokuba yiThagethi yeNkampani ngonyaka ka-2000. Yaza ke yaphambuka kwishishini layo lokugqibela ngo-2004. Ukusukela ngoko, yanwenwa ngokukhawuleza kwilizwe liphela.
Ukuqonda kweThagethi yoShishino
Njengamashishini amakhulu amakhulu, ekujoliswe kuko kuyaqonda ukuba impumelelo yabo isekwe kubomi boluntu abasebenza kulo. Yiyo ke loo nto ixhase uninzi lwesisa kwingingqi nakwilizwe. Kwakhona, iyaqonda ukuba ukubuyisela eluntwini yinxalenye yoxanduva lwabo lweshishini.
Eyona nto iphambili kwimisebenzi yesisa ekujoliswe kuyo kukuzinikela kwayo kwimfundo. Ikwaxhasa kwaye ixhase ngemali amanyathelo ahlukeneyo emfundo.
Ngapha koko, nceda uqaphele. Ezi iinkqubo zijolise ekuphuculeni umgangatho wemfundo yabantwana abasaqala isikolo, ibanga lesikolo kunye nabafundi bezikolo eziphakamileyo. Kwaye ekwenzeni ikholeji ifikeleleke ngakumbi isikolo esiphakamileyo abaphumeleleyo.
Ezinye iintlobo zoJoliso lweeScholarship
1. I-African-American kunye ne-Hispanic Student Scholarship
Le nkxaso-mali yenzelwe ukuxhasa kunye nokukhuthaza abafundi ababotshelelwe kwiikholeji kwiindawo zaseSpain nezaseAfrika naseMelika. Nangona kunjalo, abafake izicelo kufuneka babonise iimfuno zemali. Kwaye kufuneka uhlangane nemigangatho ethile yokufunda. Kwakhona, kufuneka bazibophelele ekukhonzeni uluntu lwabo.
Ngapha koko, izinikele ekuncedeni abafundi abaphumelele kwisikolo esiphakamileyo ukuba bafeze amaphupha abo emfundo yasekholejini. Kwakhona, amaqabane ekujoliswe kuwo kwiNgxowa-mali yeKholeji yase-United Negro ukuxhasa i-5000 yeedola Iithagethi / iiNkokheli zoLuntu ze-UNCF.
Ezi nkxaso-mali ziyafumaneka kubafundi be-undergraduate base-Afrika nabamaMerika. Nangona kunjalo, abafaki-zicelo kufuneka babhalise ngoku kwenye yeekholeji zamalungu e-UNCF okanye kwiiyunivesithi.
2. Iithagethi zeFashoni yeScholarship
I-Target Corporation, kunye neBhunga laBayili beFashoni baseMelika, baxhasa iNkqubo yeTarget Fashion Scholar yonyaka. Kwaye le nkqubo ibonelela nge- $ 25,000 yokufunda kumfundi obalaseleyo kwisidore.
Nangona kunjalo, umfundi kufuneka ngoku abhalise kwesinye sezikolo ezithatha inxaxheba kwiCFDA. Ukongeza, kwibhaso lemali, ekujoliswe kuko kulungiselela ukuba abaphumeleleyo batyelele ikomkhulu labo. Oku kukusebenza neQela loYilo ekuJoliswe kulo.
Kwakhona, izifundiswa ezine ezongezelelweyo ze- $ 5000 nganye zinikezelwa kwiimbaleki-ezine kwiNkqubo yeTarget Fashion Scholars.
Ithagethi ekujikeleze iScholarship
Ngelixa kwakuyinkqubo eyaziwayo kakhulu neyaziwayo ngokubanzi, inkqubo ye- Konke okujikeleze iScholarship Unqunyanyisiwe ukusukela ngo-2006. Qho ngonyaka iNkampani ekuJoliswe kuyo inikezela ngama-2100 Konke okujikeleze iScholarship.
Oku kubafundi abafanelekayo beekholeji kwilizwe lonke. Kwaye ezi zifundo zenzelwe ukunceda abafundi ababonakalise inqanaba eliphezulu lokuphumelela kwizifundo. Nokuzinikela kwinkonzo yoluntu. Kwakhona, ii-10,000 zeerandi zikazwelonke zinikezelwa minyaka le.
Ukongeza, kumabhaso esizwe, qaphela. Ivenkile nganye ekujoliswe kuyo inikezela amabhaso ezi-2 kubafundi basekuhlaleni. Nangona kunjalo, abafumanayo kufuneka baphumelele ukugqwesa kwizifundo zabo kwizikolo eziphakamileyo. Kwaye babonakalisile inyathelo, ubunkokeli / inkonzo kuluntu lwabo.
Ukufaneleka kwe Isicelo seScholarship
Ukuze uvumeleke Isicelo ekujoliswe kuso seScholarship, Phawula:
Abafundi mababe ngabafundi bezikolo eziphakamileyo abangaphantsi kweminyaka engama-24 ababhalisileyo, okanye kungekudala baya kubhalisa, kwinkqubo yesidanga sokuqala kwikholeji eyamkelweyo okanye eyunivesithi.
Abafundi mababe ubuncinci uTsvangirai I-3.0, kunye neengxowa-mali ziyafumaneka kubafundi abaphishekela iidridi kuzo zonke iinkalo eziphambili zokufunda.
Umhla wokugqibela weSicelo seScholarship
Umhla wokugqibela wesicelo seThagethi sokufunda ngoNovemba 1, 2020. Nangona kunjalo, ngolwazi oluthe kratya malunga nesicelo seThagethi yesicelo, qaphela. Abafundi kufuneka banxibelelane nenkampani ngqo kwi-1-800-316-6142.
Inkqubo yokufaka isicelo sayo yonke into ekujoliswe kuyo yokufunda iqala ngale nombolo yefowuni.
Isishwankathelo, nceda uqaphele. Kuba iinkokeli zangomso zisencinci namhlanje, ukujolisa ekufundiseni kukhuthaza abantu abancinci ukuba bafezekise amaphupha abo. Kwaye kuyabavuza abafundi abazama ukufezekisa ukugqwesa kwizikolo zabo nakwiindawo abahlala kuzo.
Ngolwazi oluthe kratya malunga nesicelo seThagethi sokufunda, qaphela. Nceda undwendwele iwebhsayithi engezantsi ngolwazi olongezelelweyo kunye neemfuno zokungena.
I SICELO LINKI
Zive ukhululekile ukufaka isicelo. Nangona kunjalo, qinisekisa ukuba uyahlangabezana neemfuno. OKUHLE KODWA.
Iimali ze-UNIBEN zeSidanga sokuqala seSikolo 2019/2020 yoMfundi oMtsha noBuyayo
Ulwazi malunga nenkampani Agro Park Development Company Limited, izabelo zokutshintshana Agro Park Development Company Limited Isikhokelo sokuSebenza kunye neemfuno
I-SDIL eNigeria yokuGaya iPortal 2019- www.seyiloked-sdil.org
Ukusetyenziswa kweNkqubo yoLwazi okuQhelekileyo kunye neNkqubo yoLwazi lweJografi kuLawulo lokuSetyenziswa koMhlaba eKaru, e-Nasarawa State, eNigeria
Iziphumo ze-BCECE 2021, iKhadi leNqanaba kunye noLuhlu lweMeriti | Jonga iziphumo apha
Ifom yeJAMB nge-Interswitch | Uyithenga njani i-2017 JAMB UTME yeFom nge-Interswitch
« IJAMB CBT Ziqhelise ukukhuphela iiSoftware kwaSimahla kunye noVuselelo olupheleleyo
Ulwabiwo-mali ukuze ufunde kwelinye ilizwe laBafundi baseNigeria uLuhlu lweZicelo ze-2021 »
I-BBN 2021 Amadoda aHlala nawo eMzini-Ngaba uyazi iinyani ngabo?
Ukuqeshwa kwabakwaMTN eNigeria 2021/2022 Ifom yesicelo sangoku
www.policerecruitment.gov.ng IPortal Portal 2021 Jonga iNPF yesicelo sePortal
Ukuqeshwa kwe-EcoBank 2021/2022 Ifom yesicelo seFortal
Ukuqeshwa kootitshala beLagos State 2021/2022 SUBEB Ifom yesicelo
I-FPI HND kwiLayibrari nakwiNgcaciso yeSayensi yokuNgena kweFom ye-2021/2022 yeSeshoni
I-UNIOSUN yoKwamkelwa koVavanyo lweFomu 2021/2022 yeSeshoni yeziFundo
Ikhalenda yezifundo ze-ACEONDO 2021/2022 yoHlaziyo lweSeshoni yeziFundo
IKhalenda yeziFundo eHlaziyiweyo ka-2021/2022 yeSeshoni yeziFundo
I-UNIOSUN Thumela i-UTME 2021/2022 Ifom yovavanyo, ukuLungela kunye noMhla wokugqibela
I-UNIOSUN Thumela i-UTME / iFom yeFomu ye-2021/2022 yokuHlolwa kweSeshini yokuHlolwa kwePortal
Ukuqeshwa kwamapolisa eNigeria 2021/2022 Ifom yesicelo
Ukuqeshwa kwamapolisa eNigeria 2021/2022 Isikhokelo sePortal yesicelo
Iikhosi zeYunivesithi yaseVERITAS kunye neMfuneko | Uluhlu olupheleleyo lweekhosi ezifundiswayo
Ukungena kweNPF yokuNgena kwabaNtu www.policerecruitment.ng 2021/2022 Uhlaziyo lwamva nje
I-7 yeeNkqubo eziBalaseleyo eJamani zaBafundi baseIndiya 2021
Uqeqesho lukaGoogle kunye nolunye uQeqesho ukuze ufake isicelo kwi2021
Igbinedion University Post UTME Form 2021/2022 Post UTME / DE Ukuhlaziya uHlaziyo
IiNkqubo eziPhambili zokuFunda kwamanye amazwe eSweden zaBafundi beZizwe ngeZizwe ngo-2021